नेपाल छिरेको कोरोनाको ‘बानीबेहोरा’ कसैलाई थाहा छैन, अनुसन्धानमा सिन्को भाँचिएन
गजेन्द्र बाेहरा काठमाडौं - सोमबार, भदौ २२, २०७७
गत जेठ २७ गते संसदको एउटा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए– ‘चीन र इटालीबाट आएको भाइरस नरम थियो। भारतबाट आएको भाइरस अलि कडा परेछ!’
प्रधानमन्त्री ओलीले फ्याट्ट भनिदिएका मात्रै हुन्, यो कुनै वैज्ञानिक तथ्य थिएन र होइन पनि।
किनकि, नेपाल भित्रिएको भाइरस के र कस्तो छ? भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक अनुसन्धान भएकै छैन।
कसले गर्छ अनुसन्धान?
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद भन्ने एउटा सरकारी केन्द्र छ। यसको खास काम भनेकै यस्तै अनुसन्धान गर्ने हो।
कोरोनाले उधुम मच्चाइरहेका बेला परिषद भने अरू देशले बनाएका भ्याक्सिन कसरी नेपालमा परीक्षण गर्ने भनेर लागिपरेको छ।
र, उसले यो बीचमा गरेको अर्काे ‘महत्वपूर्ण’ काम भनेको ‘आयुर्वेद औषधीको अध्ययन गरिरहेको छ, जस्तो कि ‘त्रिकुट’ अर्थात्, पिपलको पात, मरिच र अदुवाको धुलो।
यसले शरीरमा प्रतिरक्षा बढाउने उसको विश्वास छ।
यद्यपि, कोरोना भाइरस संक्रमण अहिले विश्वव्यापी नै हो।
तर, पनि ठाउँ विशेषमा यो भाइरसका फरक–फरक विशेषता देखिइरहेका छन्।
किनकि, ती ठाउँमा भाइरसबारे अनेक कोणबाट अनुसन्धान भइरहेका छन्।
नेपालमा भने भाइरसबारे अहिलेसम्म कुनै पनि आधाकारिक ‘अनुसन्धान पत्र’ सार्वजनिक भएको छैन। जसमा सरकारको अपनत्व होस्।
कोरोना संक्रमणले नेपालमा ताण्डव मच्चाइरहँदा नेपालको यो स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले भने सिन्कोसम्म भाँचेको छैन।
‘रिसर्च भन्ने कुरा त हचुवाको तालमा हुँदैन नि’ प्रध्यापक डा.जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन् ‘हाम्रोमा गर्नुपर्ने धेरै अनुसन्धानका कामहरु छन्, तर, यहाँ शुन्य छ। केही भएको छैन।’
यस्तो महामारीका बेलामा सबैभन्दा विश्ववासिलो र आधिकारिक निकाय नै अनुसन्धन परिषद हुनुपथ्र्याे तर, डा. अग्रवाललाई लाग्दैन त्यस्तो भएको छ।
‘हामीसँग रिसर्चरहरू, विज्ञहरू नभएका होइनन प्रशस्तै छन्। कोभिड–१९ फैलिदैँ गर्दा नै हामीले त्यसको बारेमा अनुसन्धानको तयारी गर्नुपर्ने थियो’ उनी भन्छन्।
विभिन्न देशले अहिले भ्याक्सिनसमेत बनाइसकेको दाबी गरिरहेका छन्। आआफ्नो देशमा संक्रमण फैलाइरहेको भाइरसको बारेमा कयौँ विश्व विद्यालयहरुले पनि अध्ययन गरिरहेका छन्। तर, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू भने विदा मनाइरहेका छन्।
‘अहिले दुनियाभरका भ्याक्सिन यहाँ परीक्षण गर्ने भनिएको छ, त्यसको वनरसिप त हामीले नै लिनसक्नुपर्ने थियो’ डा. अग्रवाल भन्छन् ‘हामीले नेपालमा भित्रिएिको भाइरसको बारेमा अध्ययन गरेर त्यसैअनुसारको भ्याक्सिनको बारेमा अनुसन्धान गर्न सक्थ्यौँ।’
नेपालमा कोरोना प्रवेश
गत वर्ष पुस २८ गते चीनको वुहानबाट नेपाल फर्किएका एकजना विद्यार्थीको स्वाब संकलन गरेर हङकङ पठाइयो। नेपालमा त्यो बेलासम्म कोरोना परीक्षण थिएन।
माघ ९ गते हङकङबाटै उनको रिपोर्ट ‘पोजिटिभ’ आयो।
यो नै नेपालमा पुष्टि भएको पहिलो संक्रमण थियो। उनी केही दिन अस्पताल बसेर निको भए।
त्यसपछि सरकारले ‘रिएजेन्ट’ मगाएर नेपालमै परीक्षण सुरु भयो। त्यसको केही दिनसम्म धेरै परीक्षण ‘पोजिटिभ’ भएनन्।
नेपालका स्वास्थ्य वैज्ञानिक आफैं अलमलमा परिरहेका थिए। त्यसपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोली आएर त्यसको अनुमगन गर्‌यो र, ‘ठिक’ छ भन्यो।
त्यसको केही समयपछि मात्रै फ्रान्सबाट युएई हुँदै नेपाल आएकी काठमाडौंकी एक युवतीमा संक्रमण पुष्टि भयो।
संक्रमणको त्यो सिलसिलाले ६ महिनामा ४६ हजार हजारभन्दा बढी नेपालीलाई छोइसकेको छ।
२ सय ८९ भन्दा धेरै ज्यान लिइसकेको छ।
‘सुरुमा त हामीले नेपाल भित्रिसकेको भाइरसको विशेषता पत्ता लगाउनुपर्ने थियो,’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका माइक्रोबायोलोजिस्ट डा. रञ्जित साहले आयोमेलसँग भने, ‘त्यो अनुसन्धानले हामीलाई ‘प्रतिरक्षा’ मा सघाउ पु¥याउँथ्यो।’
हरेक युद्धको एउटा विश्वव्यापी नियम हुन्छ– ‘दुश्मनका बारेमा थाहा पाएमात्रै जित सजिलो हुन्छ।’
अर्थात्, अहिलेसम्म नेपालमा भित्रिएर ताण्डव मच्चाइरहेको यो भाइरसको ‘रूपरङ’ का बारेमा अहिलेसम्म थाहै छैन।
यसको बानीबेहोरा कस्तो छ भन्ने पनि थाहा छैन। किनकि, यसको बारेमा जान्ने प्रयास कसैले गरेकै छैन।
साह उनै डाक्टर हुन् जसले त्यही भाइरसबारे अनुसन्धान गर्न ‘जेनेटिक सिक्वेन्सिङ’ को प्रयास गर्दा, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
‘हामीले यही काममात्रै गर्न सकेको भए पनि नेपालमा भित्रिएको भाइरसको बारेमा धेरै कुरा पत्ता लाग्न सक्थ्यो,’ डा. साहले भने, ‘तर, न अनुसन्धान गर्न दिइन्छ न गर्नुपर्ने निकायले नै गर्छन्।’
यो भाइरसबारे अनेक कोणबाट अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।
जस्तो कि, महिला र पुरुष संक्रमितकै बारेमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, उमेर समूहमै गर्न सकिन्छ।
विभिन्न जातजाति र समुदायमै गर्न सकिन्छ।
भौगोलिकताअनुसार हिमाल, पहाड वा तराईकै बारेमा गर्न सकिन्छ।
‘एन्टिबडी’ मै अनुसन्धान हुन सक्थ्यो। जस्तो कि, संक्रमण २ लाख मान्छेमा छ, तर ५० हजारमा मात्रै संक्रमण पुष्टि भयो। अर्थात्, त्यत्तिको मात्रै परीक्षण भयो।
अब बाँकी डेढ लाख मानिसको ‘एन्टिबडी’ ले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे अनुसन्धान भयो भने त्यसको परिणाम बाँकी लाखौंमा काम लाग्छ।
यहाँ न संक्रमितबारे अध्ययन भएको छ न मृत्युमाथि अनुसन्धान।
अनि प्रधानमन्त्री आफैं भनिदिन्छन्– ‘कोरोनाले को मरेको छ र?, अरू रोग मिसिएर पो मान्छे मरेका हुन्!’
यहाँसम्म कि, प्रधानमन्त्री आफैंले बोलेको कुरा ‘चीनको भाइरस कमजोर थियो कि, भारतबाट भित्रिएको भाइरस बलियो?’ भन्ने विषयमै अनुसन्धान भएन।
‘फरक त पक्कै हुन्छ नि, हरेक देश, हरेक क्षेत्रको भाइरसको विशेषता फरक हुनसक्छ, तर हामी त पिसिआरभन्दा माथि उठ्नै सकेका छैनौं,’ डा. साहले भने, ‘यही पिसिआर परीक्षण पनि हामीले निकै सस्तो गर्न सक्ने थियौं, तर हामीले त्यसका फ्याक्टरहरूका बारेमा केही बुझ्ने प्रयास नै गर्न सकेनौं वा गरेनौं।’
विश्वका धेरै देशमा ‘ड्राइ स्वाब’ परीक्षण भइरहेको छ। त्यसका लागि ‘भिटिएम’ (स्वाब राख्ने भाँडो) पनि चाहिन्न र अरू सामग्री पनि थोरै लाग्छ। त्यसैका लागि अहिले नेपालको करोडौं खर्च भइरहेको छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका पूर्वअध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालका अनुसार अहिलेको समयमा सारा अनुसन्धानको केन्द्र नै ‘कोभिड–१९’ हुनुपर्ने थियो।
‘यदि हामीसँग स्रोतसाधन छैन भने हामीले बाहिरबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले कम्तिमा अहिलेसम्मकै तथ्याङ्कमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्थ्यौं।’
अनुसन्धानले के हुन्थ्यो?
सजिलो गरी भन्ने हो भने भाइरस फैलिन कसरी नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने थियो। अर्थात्, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारले बनाउने रणनीतिमै पर्न जान्छ।
लकडाउनमा चार महिना खेर गए। त्यसपछि निषेधाज्ञाका नाममा धेरै साता खेर गइसकेका छन्।
‘अहिलेसम्म हामीले अरू देशकै प्रोटोकल पछ्याइरहेका छौं,’ डा. भुसाल भन्छन्, ‘नेपालमै रिसर्च भएको भए, हामीले यहाँ के कस्तो गर्ने भन्ने कुरा अझै सजिलो हुने थियो।’
जस्तो कि, काठमाडौंकै कुरा गर्दा यहाँ भाइरसबारे अध्ययन वा अनुसन्धान हुन्थ्यो भने ‘निषेधाज्ञा’ मा सरकार अल्झिरहनुपर्ने थिएन।
किनकि, सजिलैसँग थाहा हुन्थ्यो, यो भाइरसले के गर्छ, कति गर्छ? तर, यसबारे कसैलाई केही अत्तोपत्तो छैन।
‘अनुसन्धानले प्रत्यक्ष फाइदा गर्ने भनेकै सरकारको नीति निर्माणमा हो,’ डा. साह भन्छन्, ‘नेपालमा अध्ययन हुन्थ्यो र, भाइरसको स्टे«न्थ थाहा हुन्थ्यो भने त्यसको नियन्त्रणका लागि पोलिसी बनाउन सजिलो हुनेथियो।’
अर्थात्, सरकारले रणनीति बनाउने नै यस्तै अनुसन्धानका आधारमा हो। तर, नेपालमा सबै अन्धाधुन्ध छ।
केही नभएको भन्ने होइन : अनुसन्धान परिषद
कोरोना भाइरस संक्रमणको गति तीव्र भइरहेका बेला गत जेठमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले एउटा प्रस्ताव आह्वान ग¥यो।
नेपालमा कोरोना भाइरसका मानव स्वास्थ्यमा पर्ने विभिन्न प्रभावबारे अध्ययनका लागि त्यो प्रस्ताव थियो।
त्यही प्रस्तावका विभिन्न २२ शीर्षकमा अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको परिषदले जनाएको छ।
तर, भाइरसका प्राविधिक पक्षमा भने कुनै पनि अुनसन्धान भएको छैन।
‘अहिले नै केही पनि अनुसन्धान भएको छैन भन्ने बेलै भएको छैन,’ परिषदका अनुसन्धाता अधिकृत डा. सुमन पन्तले आयोमेलसँग भने, ‘हामीले गरिरहेका छौं। सबै कुराको परिणाम आउने बेला भएको छैन।’
उनका अनुसार ती २२ प्रस्तावमध्ये केहीको अध्ययन पूरा भइसकेको छ।
परिषदले आयुर्वेद औषधीको अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। आयुर्वेद औषधी त्रिकुट (पिपलको पात, मरिच र अदुवाको मिश्रण) मा पनि अनुसन्धान भइरहेको परिषदले जनाएको छ।
त्यस्तै अन्य आयुर्वेद औषधीमा पनि अनुसन्धान भइरहेको पन्तले जानकारी दिए।
अनि भाइरसको गुणका बारे?
‘हो, हामीले भाइरसको होल जिन सिक्वेन्सिङका बारेमा पनि अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको केही हप्ताभित्रै हामीले नेपाली भाइरसबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछौं।’
उनका अनुसार यसमा नेपाल भित्रिएको कोरोना भइरसका गुण, विशेषताबारे अध्ययन भइरहेको छ।
‘नेपालीको शरीरमा प्रवेश गरेको भाइरस कस्तो प्रकारको हो? सुरुमा कस्तो थियो, अहिले कस्तो भयो? भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट नेपालीको शरीरले भाइरसलाई कसरी, एडप्ट गरिरहेको छ भन्नेबारे थाहा हुनेछ।’
अर्थात्, भाइरससँगै अनुकूलन हुनका लागि नेपालीको शरीर कति तयार छ भन्नेबारेमा यो अध्ययनले बताउने छ।
‘भाइरसको जातै त्यस्तो हो, एउटाबाट अर्काेमा सर्दा उसको म्युटेसन कम भइसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यो भाइरसलाई मानिसको शरीरलाई कतिसम्म प्रभावित गर्न सक्छ, मृत्यु दर कति हुन सक्छ भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं।’